izay toa foko iray no kendrena, raha ny fahitany azy. Fakana an-keriny, vokatry ny tsy firindran’ny hetsi-panjakana enti-miady amin’ny asan-dahalo sy ny tsy fandriampahalemana any ambanivohitra izany, raha ny nambarany… Marina fa eken’ny rehetra ny hetsika ataon’ny fitondram-panjakana hiadiana amin’ny asan-dahalo. Ny mampalahelo, dia mivadika ho fanapotehana fotsiny an’ireo mpiompy manana omby an’arivony ny hetsika atao. Ary ny tena mampitebiteby, dia toa ny mpiompy avy amin’ny foko iray ihany no nokendrena, hoy ny fanamarihan’i Monja Roindefo. Ohatra amin’izany ny manjo an’Atoa Jaonary, Babo, Manamaro sy ny hafa koa tao amin’ny distrikan’i Morombe sy Manja. Olom-pirenena nandova omby maro tamin’ireo rayaman-dreniny nifandimby izy ireo. Tsy azo leferina ny fandrahonana azy ireo hotifirina avy hatrany, mba hanamorana ny fakany an-keriny sy amin’ny fomba tsy ara-dalàna ny ombiny, hoy izy. Tao Betroka, dia notafihin’ny dahalo ny tompon’omby atao hoe Rehita Velombara. Nitory tany amin’ny Fitsarana any an-toerana i Rehita Velombara, fa tsy nanao na inona na inona anefa ny Fitsarana. Niverenan’ny dahalo ary maty ny rahalahin’ny tompon’omby io, izy tenany naratra mafy ary ny omby rehetra lasa avokoa. Raha hakapoka ireo, ary dinihana akaiky ny nihatra tamin’Atoa isany Babo, Retohagnane, Soatogno, Tolike, Manamaro sy ny hafa tao amin’ny distrikan’i Morombe, dia azo heverina ho halatra bevava miaro ady ary fanenjehana foko iray no miseho. Misy mpiompy maromaro samy manana omby an’arivony manodidina ao, kanefa mahagaga fa tsy misy afa tsy ireo avy amin’ny foko iray ihany no norobaina, hoy ny praiminisitra teo aloha.